Trano malaza 5 malaza indrindra any Etazonia | Fitsangatsanganana tanteraka
Trano malaza 5 malaza indrindra any Etazonia
Avy atsinanana ka hatrany andrefana, Etazonia dia firenena goavambe izay manana ny tanàna manan-danja indrindra manerantany. Ny iray amin'izy ireo dia i Washington, ivon-toeran'ny fahefana politika sy toekarena ao amin'ny firenena. Eto an-drenivohitra isika dia afaka mitsidika trano malaza sy tena misy ifandraisany amin'ny tantaran'ny firenena izay niseho tamin'ny sarimihetsika maro. Te hahafantatra momba izany ve ianao? Tohizo ny famakiana!
1 Ny Trano Fotsy
1.1 Afaka mitsidika?
2 Katedraly Washington
3 Fahatsiarovana an'i Jefferson
4 Ny kapitenin'i Etazonia
5 Fahatsiarovana an'i Lincoln
5.1 Afaka mitsidika?
Ny Trano Fotsy
Ny trano ofisialy sy ny sehatr'asan'ny filoham-pirenena amerikanina amerikana, ny trano fotsy, dia iray amin'ireo trano malaza indrindra eto amin'ny firenena ary marika.
Izy io dia natsangana taorian'ny lalànan'ny Kongresy tamin'ny 1790 tamin'ny endrika neoklasia tamin'ny fandraisana andraikitry George Washington, nametraka ny filàna fananganana trano filoham-pirenena akaikin'ny Ony Potomac. Ny sanganasa dia natokana ho an'ny mpanao mari-trano James Hoban izay nahazo aingam-panahy avy amin'ny Château de Rastignac any Frantsa noho ny famolavolana azy ary naharitra folo taona latsaka vao vita. Na izany aza, tsy tonga nipetraka tao amin'ilay trano vaovao intsony ny filoha Washington fa notokanan'ny mpandimby azy John Adams.
Ny trano tany am-boalohany dia tsy naharitra ela taorian'ny nanimban'ny miaramila anglisy azy tamin'ny 1814 ho valifaty amin'ny fandoroana ny Parlemanta tany Canada, noho izany dia voatery nanangana ilay "tranon'ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana izany" ny amerikana. Nanomboka teo, fanitarana sy fanatsarana isan-karazany no natao tamin'ilay rafitra. Ny birao Oval malaza sy West Wing dia natsangana tamin'ny taona 1902 nandritra ny naha filoha an'i Roosvelt. raha ny elatra atsinanana kosa dia nampidirina nandritra ny fotoana nitondran'i Truman. Araka izany dia vita ilay trano fantatsika ankehitriny.
Any amin'ny 1.600 Pennsylvania Avenue any Washington no misy ny Trano Fotsy, dia fantatra noho ny endriny aoriana, ilay misy ny colonnade eo afovoany. Ety ivelany, ny halehany dia toa kely kokoa ary vitsivitsy ihany no mahalala ny tena refy: efitrano 130, efitra fandroana 35, efa ho 30 am-patana, 60 tohatra ary ascenseur 7 miparitaka amin'ny rihana 6 sy 5.100 metatra toradroa.
Eo akaikin'ny Trano Fotsy no misy ny Ivotoerana mpitsidika ny White House, izay azon'ny besinimaro atrehana. Ny fitsidihana ny Trano Fotsy amin'ny alàlan'ny fitsidihana anaty dia azon'ny olom-pirenena amerikana atao ihany. Malalaka izy ireo saingy mila manao famandrihana am-bolana mialoha ianao amin'ny alàlan'ny fanoratana amin'ny solontenan'ny Kongresy. Ho an'ny vahiny amin'izao fotoana izao dia tsy azo atao izany ka mila milamina ianao mahita ny Trano Fotsy avy any ivelany.
Ny iray amin'ireo katedraly tsara tarehy indrindra any atsinanan'i Etazonia dia ny Katedraly Nasionaly Washington. Io no faharoa lehibe indrindra ao amin'ny firenena aorian'ny Basilica an'ny National Shrine of the Immaculate Conception ao amin'ny Distrikan'i Columbia (tena akaiky an'i Washington) ary ny katedraly fahenina lehibe indrindra eran'izao tontolo izao.
Neo-Gothic amin'ny endriny, ny Katedraly Nasionaly Washington dia mampatsiahy ny basilicas eropeana lehibe ary natokana ho an'ny Apôstôly Saint Peter sy Saint Paul. Izy io dia natsangana tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary an'ny fiangonana Episkopaly any Etazonia.
Raha mandritra ny fialantsasatra any Washington dia te-hitsidika an'ity tempoly ity ianao, Hahita izany ianao eo amin'ny fihaonan'i Wisconsin sy Massachusetts Avenues, avaratra atsinanan'ny renivohitra. Nosoratana ho toy ny tsangambato ao amin'ny National Register of Hist Histaces Places ary ho fahalianana te hahafanta-javatra, raha mijery ny tilikambo avaratra ianao dia misy gargoyle manana ny fiarovan-dohan'i Darth Vader avy amin'ny Star Wars. Tsy mahazatra, sa tsy izany?
Ity mpanao kolontsaina malaza ity dia niafara tamin'ny katedraly satria ny National National Geographic World magazine dia nanao fifaninanana famolavolana ankizy iray toerana izay nahazo ny toerana fahatelo ny mpifaninana Christopher Rader. Taorinan'ny fifaninanana dia voasokitra niaraka tamin'ny sary fandresena hafa ilay sary (zazavavy misy kofehy, rakikira ary lehilahy iray elo) handravahana ny tampon'ny tilikambo avaratry ny katedraly Washington.
Fahatsiarovana an'i Jefferson
Thomas Jefferson dia toetra iray izay nanan-danja lehibe teo amin'ny tantaran'ny Etazonia. Izy no mpamolavola ny Fanambarana ny fahaleovan-tena, sekreteram-panjakana voalohany tao amin'ny governemanta George Washington, iray amin'ireo ray mpanorina ny firenena ary ny filohany fahatelo taorian'ny nandimby an'i John Adams. Farany, any Etazonia dia misy zavatra betsaka tokony tadidin'i Thomas Jefferson ary natokana ho fahatsiarovana azy ny tsangambato nataony.
Ny fahatsiarovana dia miorina amin'ny valan-tseranana Andrefana Potomac Park, amoron'ny Ony Potomac. Izy io dia nasaina naorin'ny filoha Franklin D. Roosvelt tamin'ny 1934 satria nankafiziny be ilay mpanao politika. Ho an'ny famolavolana azy, ny mpanao mari-trano dia nentanin'ny aingam-panahy avy amin'i Monticello, tranon'i Thomas Jefferson, izay avy amin'ny aingam-panahy avy amin'ny Pantheon any Roma.
Raha tsara tarehy ety ivelany ny Fahatsiarovana an'i Jefferson dia ao anaty no mahagaga satria voaravaka sora-baventy malaza avy amin'ity filoha ity ary miaraka amin'ireo sombin'ny fanambarana amerikana fahaleovan-tena aza.
Ny kapitenin'i Etazonia
Izy io dia iray amin'ireo trano tsara tarehy indrindra ao Washington izay miorina eo amin'ny manodidina an'i Capitol Hill ary sary famantarana ny demokrasia amerikanina. Eo no mifantoka ny fahefan'ny mpanao lalàna amerikanina: ny tranon'ny solontena sy ny loholona.
Ny tranon'ny fanjakana amerikana dia noforonin'i William Thornton ary dingana voalohany no vita tamin'ny fiandohan'ny taona XNUMX. Taty aoriana, ny arsitekana hafa dia nanao fanovana izay nanome ilay sarotra izay mampiavaka ny fomba neoklassical.
Ny dingana voalohany dia vita tamin'ny taona 1800 ary iray amin'ireo manintona mpizahatany eto an-tanàna. Ireo mpanao mari-trano Thomas U. Walter sy August Schoenborn dia namolavola ny dôsy ankehitriny eo afovoan'ny firafitra apetraky ny sarivongana vehivavy, ny endrik'izy ireo dia azo jerena lavidavitra rehefa mifarana eo ny lalan'i Maryland sy Pennsylvania.
Ireo izay nisafidy ny tranokala hananganana ny tranoben'ny Etazonia dia nikapoka ny lohany satria teo ambonin'ilay havoana no toa lehibe kokoa aza, izay ohatra iray tonga lafatra amin'ny tandindon'ny fahefana..
Fahatsiarovana an'i Lincoln
Iray amin'ireo trano malaza indrindra any Etazonia koa ny Lincoln Memorial, tsangambato mahatalanjona natokana ho an'ny sarin'i Abraham Lincoln, filoham-pirenena fahenina ambin'ny folo an'ny firenena.s izay hita ao anatin'ny valan-javaboary iray ao afovoan-drenivohitra fantatra amin'ny anarana hoe National Mall .. Ireto misy tsangambato manan-danja hafa toa ny Obelisk of Washington, ny sarivongan'i General Grant ary ny tsangambato Lincoln, olona telo tena misy ifandraisany amin'ny tantaran'ny Amerikanina.
Nosokafana tamin'ny 1922, ny Lincoln Memorial dia trano miendrika tempoly grika tadiavin'ny Kongresy Nasionaly hananganana fanomezana ho an'ilay mpanao politika malaza. Tohatra lehibe iray mankany amin'ny efitrano ahafahantsika mahita sarivongana be an'i Abraham Lincoln (nataon'i Daniel Chester French), sary hosodoko isan-karazany ary sary roa miaraka amin'ny sombintsombin'ny lahatenin'ny filoha sasany.
Tamin'ny 1963 dia ny fahatsiarovana an'i Lincoln no sehatry ny kabary malaza "I Have a Dream" nataon'ny pasitera sy ilay mpiaro ny zon'olombelona Martin Luther King. Ao amin'ny National Mall dia azonao atao koa ny mahita sarivongana natokana ho an'ny endriny metatra vitsivitsy miala ny fahatsiarovana.
Maimaimpoana ny fidirana amin'ny Fahatsiarovana an'i Lincoln ary misokatra manomboka amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny 12 maraina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Trano malaza 5 malaza indrindra any Etazonia
Ny Lalao Pythian, tantara ary fanatanjahantena ao Delphi
Rickshaw, ilay fitaterana nentim-paharazana sinoa